कोरोना भाइरससम्बन्धी बागमती प्रदेशको अवस्था (चैत २८ गते) – इन्सेक
कोरोना भाइरससम्बन्धी बागमती प्रदेशको अवस्था (चैत २८ गते)
मकवानपुर ०७६ चैत २८ गते
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोकथामको लागि उच्च सतर्कताका अपनाउने क्रममा बागमती प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहहरूले गरिरहेका कार्य र समस्याका बारेमा इन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधिहरूले जिल्लागत प्रतिवेदन पठाउनुभएको छ ।
इन्सेक धादिङ जिल्ला प्रतिनिधि सिताराम अधिकारीका अनुसार जिल्ला अनुगमन समितिले धादिङको तरकारी बजार र इँटा भट्टाहरूमा अनुगमन गरेको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रूद्रबहादुर मल्लको संयोजकत्वमा गठित अनुगमन समितिले धादिङबेसीका १२ ओटा तरकारी पसलहरूमा अनुगमन गरेको थियो ।
किसानले बेचेको भन्दा तीन/चार गुणा बढी मूल्यमा तरकारी विक्री गर्ने गरेको भेटिएको थियो । तरकारी व्यापारीहरूले अनुगमन टोलीलाई आफूहरूले सस्तो मूल्यमा तरकारी विक्री गरिरहेको बताएको भए पनि अनुगमन टोली बाहिर निस्कने बित्तिकै मूल्य बढाएर विक्री गरिरहेको उपभोक्ताहरूले गुनासो गरेका छन् । खरिद अनुसारको मूल्य सूची बनाई पसलमा राखेर विक्री गर्न तरकारी पसलेहरूलाई अनुगमन समितिले निर्देशन गरेको छ ।
धुनिबेसी नगरपालिकाका तीन ओटा इँटा उद्योगहरूको अनुगमनका क्रममा ६ सय ५० मजदुरहरू उद्योगमा नै रहेको र दुई ओटा उद्यागले कच्चा पदार्थ अभावमा इँटा पकाउन नसकेको भेटिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रूद्रबहादुर मल्लले जानकारी दिनुभयो ।
इँटा उद्योगको मजदुरहरू सरसफाइको अवस्था अत्यन्तै नाजुक रहेकोले सरसफाईमा ध्यान दिन र उद्योग भन्दा बाहिरका मानिसहरूसँग भेटघाट नगर्न आग्रह सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मल्लले आग्रह गर्नु भएको छ ।
जिल्लामा खाद्यान्नको अभाव नभएको धादिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष रूद्रबहादुर खत्रीले अनुगमनको क्रममा बताउनु भएको छ ।
जिल्लाको उत्तरी भेगमा तीन महिनालाई पुग्ने गरी खाद्यान्न ढुवानी गरी स्थानीय बजारहरूमा पुर्‍याइएको छ । सदरमुकाम र आसपासका क्षेत्रका लागि ४५ दिनका लागि पुग्ने गरी खाद्यान्न मौज्दात रहेको अध्यक्ष खत्रीले बताउनु भयो । जिल्लामा नियमित खाद्यान्न सप्लाई भइरहेको र खाद्यान्न पर्याप्त मात्रामा रहेकोले प्रमुख जिल्ला अधिकारी असमान तामाङले बताउनु भयो ।
बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका-७ मा १ सय ८९ परिवारलाई त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकामा ४ सय ४९ परिवारलाई राहत वितरण गरिएको छ ।
इन्सेक मकवानपुर जिल्ला प्रतिनिधि पुष्पराज अधिकारीका अनुसार सङ्घीय सरकारले लकडाउन गरेको समयमा दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवन निर्वाह गर्ने २ सय १० परिवारलाई भीमफेदी गाउँपालिकाले राहत वितरण गर्ने जनाएको छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिदम लामाले आफूहरूले राहत लिनेको नामावली सार्वजनिक गरेको बताउनु भयो । गाउँपालिकाले राहत वितरणको लागि ४ लाख ४६ हजार रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका-४ ख्वाप गल्लीमा रहेको तरकारी बजारमा चैत २८ गतेबाट खुद्रा किन्नेलाई उक्त क्षेत्रमा जान रोक लगाइएको छ । तरकारी खरिदका क्रममा भीडभाड भएपछि शुक्रबारबाट तरकारी बजार बन्द गरिएको हो ।
व्यवसायीहरूलाई सेनिटाइजर, पन्जा र मास्कको प्रयोग गरी सुरक्षित रूपमा भीडभाड नगरी तरकारी खरिद विक्री गर्न आग्रह गरे पनि व्यवसायीहरूले लापरवाही गरेपछि चैत २८ गते बिहान बसेको कमाण्ड पोष्टको बैठकले ख्वापगल्लीको तरकारी बजार बन्द गर्ने निर्णय गरेको सूचना अधिकारी देवचन्द्र गर्तौलाले जानकारी दिनु भयो ।
बसपार्कमा रहेको तरकारी बजार तथा ख्वाप गल्लीमा रहेको तरकारी बजारबाट होलसेल व्यापारीलाई मात्र तरकारी बेच्न दिने निर्णय गरिएको भएपनि उक्त निर्णय कार्यन्वयन नहुँदा उक्त क्षेत्रमा भीड बढेको थियो ।
मकवानपुर गढी गाउँपलिकाले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका २३ जना व्यक्तिलाई उच्च निगरानीमा राखेको छ । गाउँपालिकाले उनीहरूलाई उच्च निगरानीमा होम क्वारेण्टाइनमा राखिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिदुर हुमागाईंले जानकारी दिनुभयो ।
गाउँपालिकाको आठ ओटै वडामा विदेशबाट आएका नागरिहरूको घर घरमै पुगेर ज्वरो जाँच गर्ने गरेको अध्यक्ष हुमागाईंले बताउनु भयो । गाउँपालिकाले विदेशबाट फर्किएकाहरूको नामावली गाउँपालिकाको वेबसाइडमा समेत सार्वजनिक समेत गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार पुडासैनीले जानकारी दिनुभयो ।
थाहा नगरपालिकाले वृद्धवृद्धा, दीर्घ रोगीहरूले नियमित सेवन गर्ने र नगरपालिका क्षेत्रमा उपलब्ध नहुने औषधिका लागि दौडधुप गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्ता बिरामीका लागि नगरपालिकाले औषधि सम्बन्धित वडामै पुर्‍याउने व्यवस्था गर्ने भएको हो ।
बिरामीहरूले लाग्ने रकम र औषधिको विवरण आफ्नो वडा कार्यालयहरूमा टिपाएपछि नगरपालिकाले अन्यत्रबाट उक्त औषधि झिकाउन समन्वय गर्ने निर्णय भएको मेयर लबशेर बिष्टले जानकारी दिनुभयो । लामो समयसम्म लकडाउन हुँदा नियमित औषधि सेवन गर्नेहरूको समस्यालाई सहजिकरण गर्न नगरपालिकाले यो काम थालेको हो । 'सेवन गरिरहेको औषधि स्थानीय क्षेत्रमा नपाउँदा बढेको जोखिमलाई कम गर्न यस्तो कामको थालनी गरिएको हो ।'-मेयर विष्टले भन्नुभयो ।
लकडाउनका बेला औषधि लिन जान नपाएर नागरिकले ज्यानसम्म जानसक्ने भएकोले वडा मार्फत विवरण सङ्कलन गरी स्वास्थ्य शाखाको संयोजनमा औषधिको व्यवस्थापन गरिएको उहाँले बताउनु भयो ।
इन्सेक रामेछाप जिल्ला प्रतिनिधि नवराज घिमिरेका अनुसार रामेछापमा क्वारेण्टाइनमा बस्नेहरूको सङ्ख्या घटेको छ ।
जिल्ला भरिमा ८० जनालाई क्वारेण्टाइनमा राखिएकोमा उनीहरूमा कोरोनाको कुनै लक्षण नदेखिएपछि छाडिएको छ । चैत २७ गते साँझसम्म ६२ जनालाई होम क्वारेण्टाइनमा राखिएको जिल्ला अस्पताल रामेछापले जनाएको छ ।
मन्थली नगरपालिकामा ज्वरोका कारण मृत्यु भएका वृद्धको उपचारमा सङ्लग्न ११ जना स्वाथ्यकर्मी र मृतकको परिवारका चार जनालाई पनि क्वारेण्टाइनबाट छुटाइएको छ । मृतकको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि मृतकको परिवारका सदस्य र उपचारमा सङ्लग्न स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई क्वारेण्टाइनबाट छुटाइएको जिल्ला अस्पताल रामेछापका प्रमुख जितेन्द्रकुमार कर्णले जानकारी दिनुभयो ।
रामेछापमा हालसम्म २ सय ८५ शैया क्वारेण्टाइन र ५८ बेड आइसोलेशन कक्ष स्थापना भएका छन् ।
रामेछापकका सबै स्थानीय तहले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार र राहत कोष स्थापना गरेका छन् । लिखु तामाकोसी गाउँपालिकाले कोष स्थापना गरेसँगै जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरूमा सो कोष खडा भएको हो ।
लिखु तामाकोसी गाउँपालिकाको बैठकले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण, रोकथाम तथा उपचार सञ्चालन कार्यविधि निर्माण गरेर कोष स्थापना गरेको वडा-४ का अध्यक्ष लिलाबहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । कार्यपालिका बैठकले २० लाख रुपियाँरुपियाँको कोष स्थापना गरेको छ । बैठकले गाउँपालिका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा रोग नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन समिति समेत गठन गरेको छ ।
जिल्लाको मन्थली नगरपालिकाले यस अघि नै १ करोड रुपियाँको कोष स्थापना गरेको छ । रामेछाप नगरपालिकाले ३५ लाख रुपियाँ, खाँडादेवी गाउँपालिकाले १५ लाख रुपियाँ, गोकुलगङ्गा गाउँपालिकाले १० लाख रुपियाँ, उमाकुण्ड गाउँपालिकाले १० लाख रुपियाँ र सुनपाति गाउँपालिकाले २६ लाख रुपियाँको कोष स्थापना गरेका छन् ।
स्थानीय प्रशासनले चैत २८ गतेदेखि जिल्ला सदरमुकाम मन्थली बजारमा अत्यावश्यक खाद्यान्न, दुध, तरकारी, फलफूल पसल र ग्यास डिपोहरू बिहान ६ बजेबाट ९ बजेसम्म खुल्ला राख्ने निर्णय गरेको छ । औषधि पसल, सञ्चार, एम्बुलेन्स, शव बाहान लगायतका सेवा भने सबै समय खुल्ला रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारी रूद्रादेवी शार्माले जानकारी दिनुभयो ।
इन्सेक दोलखा जिल्ला प्रतिनिधि उद्धव पोखरेलका अनुसार कोभिड १९ को नियन्त्रणका लागि दोलखा जिल्ला भर ५ सय भन्दाबढी स्वास्थ्यकर्मी परिचालित भएका छन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दोलखाका अनुसार जिल्लाका नौ ओटा स्थानीय तहमा रहेका ५३ ओटा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत ३ सय ३६ र निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत १ सय बढी स्वास्थ्यकर्मीहरू परिचालित भएका छन् ।
जिरी नगरपालिकाले नगर क्षेत्र भित्र कोभिङ-१९ को सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न जारी लकडाउनका कारण खानाको अभाव हुने व्यक्तिहरूलाई बिहान बेलुका खानाको व्यवस्था गरेको छ । नगरपालिकाका मेयर टङ्क जिरेलले ज्याला मजदुरी गरेर बिहान बेलुका छाक टार्ने, सडकमै जीवन गुजारा गर्नेहरूका लागि स्थानीय होटलहरूमा खानाको व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो ।
जिरी नगरपालिकाले कोरोना विरूद्धको पूर्वतयारीमा जिरी अस्पतालमा विशेष सुविधासहितको आइसोलेशन कक्षको निर्माण गरेको छ । चार शैयाको आइसोलेशन कक्ष सरकारले तोकेको अनुसार मापदण्ड पूरा गरी निर्माण गरिएको मेयर जिरेलले जानकारी दिनुभयो । उक्त अस्पतालमा शङकाष्पद बिरामीको स्वाब परीक्षण पनि सुरू गरिएको छ । पाँच शैयाको क्वारेण्टाइन तयार पारिएको र आवश्यकता परे दुई दिनभित्र २ सय शैयाको क्वारेण्टाइन निर्माण गर्न सकिने जानकारी मेयर जिरेलले दिनुभयो ।
बिरामी बोक्नु पर्ने एम्बुलेन्सले यात्रु ओसारेको पाएपछि दोलखामा चैत २८ गते दुई ओटा एम्बुलेन्सलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
लकडाउनका बेला एम्बुलेन्सले यात्रु ओसार्न थालेको सूचनाको आधारमा गरिएको निगरानीको क्रममा प्रहरीले दुई ओटा एम्बुलेन्सलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।
इन्सेक सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रतिनिधि नातिबाबु धितालका अनुसार कोरोना भइरसका कारण गत माघदेखि बन्द भएको चीनसँगको तातोपानी नाका खुलेको छ । तातोपानी नाकाबाट चैत २७ गते माक्स र सेनिटाइजरको परीक्षण गरेर नेपाल भित्र्याइएको छ । तत्काल अत्यावश्यक वस्तुहरू खाद्यान्न तथा औषधि आयात गर्न चिनियाँ पक्ष र नेपालपक्ष बीच सहमति भएपछि सामग्री नेपाल भित्रिएको भोटेकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार पौड्यालले बताउनु भयो ।
कोरोना भाइरसको सम्भावित सङ्क्रमणलाई ध्यानमा राखी नाकामा विश्व स्वास्थ्य सङगठन अन्तर्गतको मापदण्ड बमोजिम हेल्थ डेक्स राखिएको छ । भोटेकोशी गाउँपालिका स्थित झिर्पुमा १० बेडको आइसोलेशन र १० शैयाको क्वारेण्टाइन तयारी अवस्थामा भएको गाउँपालिका अध्यक्ष पौड्यालले बताउनु भयो ।
जिल्लामा रहेको तीन ओटा क्वारेण्टाइन केन्द्रको लागी पूर्व कानुन मन्त्री तथा सिन्धुपाल्चोक प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नं २ का सांसद शेरबहादुर तामाङले स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको छ ।
सुनकोशी गाउँपालिका-५ स्थित पाङग्रेटार, चौतारा सागाँचोगढी नगरपालिका-७ स्थित मेलचौर र मेलम्ची नगरपालिकामा रहेको क्षत्रिय स्तरको क्वारेण्टाइन केन्द्रमा आफैँ पुगेर सांसद तामाङले स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको बाह्रविसे नगरपालिका प्रमुख निमफुञ्जु शेर्पाले बताउनु भयो । क्षत्रिय स्तरको उक्त क्वारेण्टाइन केन्द्र सञ्चालनको लागी जिल्लाका प्रत्यक गाउँपालिकाले पाँच/पाँच लाख रुपियाँ सहयोग भएको मेलम्ची नगरपालिका प्रमुख डम्बर अर्यालयले बताउनु भयो ।
विपद न्यूनिकारणको लागी त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले ६० लाख रुपियाँको कोष स्थापना गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष भूपेन्द्र श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
इन्सेक चितवन जिल्ला प्रतिनिधि दीपेन्द्र अधिकारीका अनुसार भरतपुर अस्पताल र भरतपुर कोरोना विशेष अस्पतालमा कोरोना टेष्टिङ बुथ स्थापना गरिएको छ ।
भरतपुर कोरोना विशेष अस्पतालमा चार जना र भरतपुर अस्पतालमा एक जना आइसोलेशनमा उपचार भइरहेको छ । चैत २८ गते लकडाउन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा पाँच जना गिरफ्तार परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी एकनारायण कोइरालाले बताउनु भयो । त्यस्तै जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ भरतपुर चितवले एसईई दिने विद्याथीलाई लक्षित गरी अनलाइन शिक्षा थालेको छ । हरेक दिन साँझ १ घण्टा तोकिएको शिक्षकले कक्षा लिने एकाइका प्रमुख भुमिलाल सुवेदीले बताउनु भयो ।
चैत २८ गते १७ जनामा कोरोना परीक्षणका लागि पठाइएको छ । तर, नतिजा नआइसकेको कोरोना विशेष अस्पताल र भरतपुर अस्पतालले जनाएको छ । जिल्लाका सबै स्थानीयतहहरूले गरिव, विपन्न नागरिकका लागि राहत वितरण गरिरेहका छन् ।
इन्सेक सिन्धुली जिल्ला प्रतिनिधि बिमला पाण्डेका अनुसार सुनकोशी गाउँपालिकामा अब १५ दिनलाई मात्र पुग्ने खाद्यान्न स्टक रहेको छ । गाउँपालिकाले गरेको सर्भे अनुसार गाउँपालिकामा रहेको चामल, चिउरा, तेल, नुन लगायतका अत्यावश्यक सामानको स्टक १५ वा २० दिनका लागि मात्र पुग्न सक्ने अवस्था रहेको गाउँपालिकाकी अध्यक्ष दिपा बोहोरा दाहालले बताउनु भयो ।
गाउँपालिका भित्र ४० हजार ७ सय किलो चामल, ४ हजार ६ सय किलो चिउरा, २ सय ५५ किलो नुन र ६ सय कार्टन खाने तेल स्टक रहेको दाहालले बताउनु भयो । उहाँले केही चाउचाउ पनि स्टक रहेको तर विपी राजमार्गमा हिड्ने पैदल यात्रुलाई खुवाउन पनि नपुग्ने बताउनु भयो ।
जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकमा त्यसपछिको खाद्यान्न व्यवस्थापनमा गाउँपालिकाले समस्या झेल्न सक्ने हुनाले जिल्लाबाटै त्यसको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न उहाँले आग्रह गर्नु भएको छ ।
जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले सबै स्थानीय तहमा सङ्ककट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै सिन्धुलीमा राहत वितरण गर्न चाहाने निकाय, सङ्घ संस्था र व्यक्तिले राहत दिन चाहेमा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने र सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसारको राहत भएमा मात्र उक्त राहत लिई वडास्तरीय समिति मार्फत वितरण गरी एकरूपता कायम गर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीको मौज्दातको विवरण लिई खाद्य सामग्रीको अभाव हुन नदिन सम्बन्धित स्थानीय तहबाट विशेष पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
सिन्धुली अस्पताल बाहेकका अन्य आइसोलेशनमा आवश्यक उपकरण, दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको पाईएको छ । सिन्धुली अस्पतालमा भेण्टिलेटर बनाउन नसकिएको अस्पतालले जनाएको छ । स्वाव निकाल्ने स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ । २ सय २० क्वारेण्टाइन, ३३ आइसोलेशन, १६ हेल्थ डेस्क, ७ थर्मल गन र २ सय ४३ पीपीई मात्र रहेको बताइएको छ । क्वारेन्टाईनमा नागरिकलाई राख्न नसकिएको बताइएको छ । दुधौलीमा १ जनालाई क्वारेन्टाईनमा राखिएको छ अन्य ११ जना फिर्ता गएका छन ।
कोरोना सङ्क्रमण व्यवस्थापनका लागि आपतकालिन अवस्थामा प्रयोग गर्न चार ओटा एम्बुलेन्स द्रुत व्यवस्थापनका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको छ । सिन्धुलीमा ज्वरो नाप्ने थर्मल गनकै अभाव देखिएको छ । जिल्लामा जम्मा सात ओटा मात्र थर्मल गन रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ । थर्मल गन किन्न समेत नपाएका कारण जिल्लामा थर्मल गनको अभाव भएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुली, जिल्लाका स्थानीय तह, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुली अस्पताल लगायतले थर्मल गन खरिद गर्न खोजे पनि बजारमा नपाएपछि समस्या भएको हो ।
जसका कारण जिल्लामा सञ्चालित १६ ओटा हेल्थ हेल्प डेक्स सञ्चालन गरी ज्वरो नाप्न समेत समस्या भएको छ । थर्मल गन खरिदका लागि समन्वय तथा पत्राचार भईरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ ।
हरिहरपुरगढीका अध्यक्ष कार्साङ लामाले थर्मल गन नभएकाले ज्वरो समेत नाप्न कठिन भएको बताउनु भयो । उहाँले सर्लाही, बारा, पर्सा जाने र उताबाट सिन्धुली आउनेका कारण स्थानीयमा त्रास भए पनि ज्वरो नाप्न समेत नसकिएको बताउनु भयो ।
यस्तै फिक्कल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पार्वती सुनुवारले थर्मल गन किन्न नपाएकाले हेल्थ हेल्प डेक्स नै सञ्चालनमा समस्या आएको बताउनु भयो । तिनपाटन गाउँपालिका, घ्याङलेख गाउँपालिका, मरिण गाउँपालिका लगायतका स्थानीय तहहरू समेत थर्मल गन नपाएर समस्यामा परेका छन् ।
जिल्लामा वैदेशिक रोजगारबाट आउनेका कारण समस्या नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी योगेन्द्र प्रसाद पाण्डेले बताउनु भएको छ । उहाँले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकमा हालसम्म जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमण व्यवस्थापन तथा उपचारमा भएका कामहरूको समिक्षात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै चैत २८ गते त्यस्तो जानकारी दिनु भएको हो ।
फागुनदेखि जिल्लाका नौ ओटै स्थानीय सरकारले खोजी गरेको तथ्याङ्कमा २ सय सात जना विदेशबाट आएको र चैत ११ गतेपछि आएका तीन जना पनि स्वस्थ रहेकाले विदेशबाट आउनेका कारण सिन्धुली जोखिममा नरहेको बताउनु भयो । उनीहरूको निगरानी र स्वास्थ्य जाँच समेत स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाले गरिरहेकाले सिन्धुली जोखिममुक्त रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
कमलामाई नगरपालिको बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिएको छ । चैत २८ गते कमलामाई नगरपालिका-९ भिमान बजारमा अनुगमन गरिएको छ । भिमान बजारमा रहेको तरकारी तथा फलफुल बजार, किराना पसल, डेरीलगायत विभिन्न दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूको बजारको अवस्था, गुणस्तरीयता र बजार मुल्यको अनुगमन गरिएको कमलामाई नगरपालिकाकी उपप्रमुख मन्जु देवकोटाले बताउनु भयो ।
काठमाडौँबाट विपि राजमार्ग र मध्यपहाडी राजमार्ग हुँदै दैनिक पूर्वी तराई र पूर्वी पहाडी जिल्ला जाने पैदल यात्रुहरूको भिड लाग्न थालेपछि सडक छेउका स्थानीयवासीमा त्रास रहेको बताइएको छ ।
विपी राजमार्ग हुदै आउने पैदल यात्रुहरू सडकमै बास बस्ने, हिड्ने क्रम बढेसँगै स्थानीय सरकारहरूले त्रासका बाबजुद दैनिक सयौँको सङ्ख्यामा यात्रुहरूलाई उद्धार गरी गन्तव्यमा पुर्‍याउँदै आएका छन् । सुनकोशी गाउँपालिका, गोलञ्जोर गाउँपालिका, फिक्कल गाउँपालिका र कमलामाई नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी यात्रुहरू बढेको र उनीहरूलाई ती स्थानीय तहले सहयोग गर्ने गरेका छन् ।
सरकारले एक स्थानीय तहदेखि अर्को स्थानीय तहमा समेत गन्तव्य रोकेपछि ती स्थानीय तहले एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा पुग्न सहयोग गर्ने गरेका हुन् । यि गाउँपालिकाहरूल दैनिक २ सय देखि २ सय ५० जना मजदुरहरूलाई खाजा, पानी, सवारी सुविधा सहित उद्धार गरिरहेको छ ।
फिक्कल गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर कार्कीका अनुसार उक्त गाउँपालिकाको खर्चमा दैनिक आठदेखि १० ट्रिप पैदल यात्रुलाई गाउँपालिकाको बोर्डर कटाउने गरेको छ ।
सिन्धुलीका तराईसँग नाका जोडिएका दुधौली नगरपालिका, कमलामाई नगरपालिका, मरिण गाउँपालिका र हरिहरपुरगढी गाउँपालिकामा पनि पैदल यात्रु नियन्त्रण गर्न कठिनाई परेको छ । ती स्थानीय तहले प्रहरीको सहयोगमा निगरानी बढाएका भए पनि नियन्त्रणमा निकै कठिनाई आइरहेको जनाएका छन् ।
इन्सेक रसुवा जिल्ला प्रतिनिधि हेमनाथ खतिवडाका अनुसार रसुवाको पाँच ओटा गाउँपालिकामा विभाजित जिल्लामा स्थानीय तहले १० लाखदेखि रुपियाँसम्म कोरोना विपद् कोष स्थापना गरेका छन् ।
जसका कारण सदरमुकाम धुन्चे र बजार क्षेत्र घरहरू ठप्प छन् । कोरोना भाइरसका कारण अहिलेसम्म रसुवा जिल्लामा सङ्क्रमण देखिएको छैन । हालसम्म तीन जनामा कोरोना सङ्क्रमणको शङ्काले काठमाण्डौँमा आफ्नै घरको क्वारेन्टाइनमा छन् । १६ जना भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आएकाहरूको तथ्याङ्क छ ।
जिल्लामा २९ स्वास्थ्य संस्था हेल्थ डेक्स ९ ओटा, २ सय १० शैया क्वारेन्टाईन, ३५ शैया आइसेालेसन तयार भएपनि हालसम्म कोही पनि बसेका छैनन् । जिल्लाका विभिन्न आयोजनामा काम गर्ने मजदुरहरू झण्डै ६ सय जना अझै अलपत्र छन् । उनीहरू जिल्ला बाहिरका हुन् । लकडाउनका कारण उनीहरू घर परिवारमा जान पाएनन् ।
लकडाउनको समयमा राहत सामग्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएपनि आफुखुशी केही ठाउँमा भेला गरेर राहत वितरण गर्ने क्रम चलिरहेको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य मोहन आचार्य र बागमती प्रदेशसभा सदस्य प्रेम तामाङले भिडभाड जम्मा गरेर राहत वितरण गरेकोमा नकारात्मक टिप्पणी भएको छ । उनीहरूले उत्तरगया र आमाछोदिङमो गाउँपालिकामा राहत वितरण गरेका छन् । कोरोना सङ्क्रमण फैलिन सक्ने सम्भावनालाई रोक्न स्थानीय तहमा नाकाबन्दी गर्ने भनेपनि रसुवामा गाउँ गाउँमा आन्तरिक आवतजावत तथा काठमाडौँ र नुवाकोटबाट समेत मानिसहरू आउन जाने क्रम रोकिएको छैन ।
जिल्लाभर स्थानीय तहले दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर छाक टार्ने असङ्गठित मजदुरको लगत संकलन भइरहेको छ । उत्तरगया गाउँपालिकामा वडा नं ४ मा ५४ जना, २ मा ३२ ३ मा २६ परिवारलाई राहत वितरण भयो । वडा नं ५ का १ सय जना र वडा नं १ का ७ सय जना भूकम्पका कारण विस्थापित समुदायको लगत संsmन भयो भने त्यहाँ जगृति बाल तथा युवा सरोकार नेपाल नामक सामाजिक संस्था, माथिल्लो मैलुङ र माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत आयोजनाले सहयोग गर्ने भएको उत्तरगया गाउँपालिका उपाध्यक्ष चमेली गुरूङले बताउनु भयो ।
इन्सेक ललितपुर जिल्ला प्रतिनिधि दीपकप्रसाद घिमिरेका अनुसार ललितपुर महानगरपालिकाले कोरोना रोकथामको लागि ५ करोडको कोष स्थापना गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारबाट २० लाख रुपियाँ थप भएको सामाजिक विकास समितिका संयोजक दिनेश कार्कीले जानकारी दिनु भयो ।
महालक्ष्मी नगरपालिकाले १ करोड १० लाख रुपियाँको कोष बनाएको छ । महालक्ष्मी नगरपालिकाले राहत वितरण चैत २८ गतेदेखि सुरू गरिएको छ । यो नगरपालिकामा १० हजार २ सय परिवारलाई राहत वितरण गर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ ।
गोदावरी नगरपालिकामा ७ हजार १ सय १० परिवारको तथ्याङ्क सङ्कलन भएकोमा उनीहरूलाई राहत वितरण सुरू गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले बताउनु भयो । राहत वितरणका लागि लाई ९० लाख रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको गरिएको महर्जनले बताउनु भयो ।
महाँकाल गाउँपालिकाले कोरोना भाइरस नियन्त्रण, उपचार र राहतका लागि २५ लाख रुपियाँको कोष बनाएको छ ।
जिल्लाभरमा ललितपुर महानगरपालिकामा रहेको पाटन अस्पताल, महालक्ष्मी नगरपालिकामा रहेको किष्ट अस्पताल र गोदावरी नगरपालिकामा रहेको बज्रबाराही चापागाउँ अस्पतालमा कोभिड-१९ को लक्षण देखिएका बिरामीहरूको उपचार व्यवस्था गरिएको जनस्वास्थ्य कार्यालय ललितपुरका प्रमुख डा.खगेश्वर गेलालले जानकारी दिनुभयो ।
ललितपुरमा ४१ जनाको स्वाब परीक्षण गरिएकोमा सबै जनाको नेगेाटिभ रिपोर्ट आएको छ भने चैत २७ गते कोरोना आशङ्कामा स्वाब सङ्कलन गरिएका दुई जना बिरामीको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको छ । चैत २८ गते ७ जना बिरामीलाई पाटन अस्पतालमा भर्ना गरिएको अस्पतालका निर्देशक डा. विष्णु शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
विदेशबाट आएका महालक्ष्मी नगरपालिकामा बसोबास गरिरहेका ६९ जनाको स्वाब परीक्षणका लागि चैत २८ गते शुक्रराज ट्रपिकल एवम् सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा पठाइएको छ । कोभिड-१९ को शङ्का लागेका दुई जनालाई किष्ट अस्पतालमा भर्ना गरिएको महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
ललितपुर महानगरपालिकामा १९ हजार ४ सय ७३ परिवारको तथ्याङ्क सङ्कलन भएको ललितपुर महानगरपालिकाका सामाजिक विकास समिति संयोजक दिनेश कार्कीले बताउनु भयो । ललितपुर महानगरपालिकाले सरकारी मापदण्ड अनुरुप वितरण गर्दा ठूलो खर्च हुने देखिएको भन्दै राहतको परिमाण घटाएको छ ।
गोदावरी नगरपालिका-१३ झरुवाराशी साविकका नौ ओटा वडा अनुसार ५ सय ९५ परिवारलाई कुपन बाँडिएको र कुपन अनुसार राहत बाँड्दा सामाजिक दुरी कायम गर्न सजिलो भएको वडा अध्यक्ष एवम् गोदावरी नगरपालिका सामाजिक विकास समिति संयोजक भास्कर थापाले बताउनु भयो ।
इन्सेक भक्तपुर जिल्ला प्रतिनिधि रमेश गिरीका अनुसार कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा भएको छलफलले जिल्लामा रहेका चारओटै नगरपालिकामा स्वास्थ्य सामग्री, खाद्यान्न, व्यवस्थित राहत वितरण, दैनिक उपभोग्य सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
चाँगुनारायण नगरपालिकाको विपद कोषमा भक्तपुर इँटा उद्योग सङ्घलाई अध्यक्ष नातिभाई हेम्बाले सङ्घका तर्फबाट ४ लाख रुपियाँ जम्मा गरेको छ । त्यस्तै बागमती प्रदेशसभा सदस्य कृष्णलाल भडेलले नगरपालिकालाई १९ थान पीपीई प्रदान गर्नु भएको छ । सो पीपीई नगरपालिकामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी तथा एम्बुलेन्स चालकलाई वितरण गर्ने भएको छ । चाँगुनारायण नगरपालिकाले चैत २८ गते पनि राहत वितरण कार्य विभिन्न वडामा जारी राखेको मेयर सोमप्रसाद मिश्रले जानकारी दिनुभयो ।
सुर्यबिनायक नगरपालिका-३ बालकोटमा सञ्चालित 'परेली आर्युबेद हाउस' लाई सिलबन्दी गरेको छ । औषधि व्यवस्था विभाग बिजुली बजार काठमाडौँका फार्मेसी अधिकृत धनबहादुर बोहोरा, नेपाल प्रहरी र स्थानीय जनप्रतिनिधिको टोलीले हाउसमा सिलबन्दी गरेको महानरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका डिएसपी दीपक गिरीले जानकारी दिनुभयो ।
इन्सेक भक्तपुर जिल्ला प्रतिनिधि रमेश गिरीकै अनुसार चैत २८ गते एकै दिन १ हजारभन्दा बढीमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भएनभएको नमूना परीक्षण गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले कोभिड १९ को टेष्टको दायरा बढाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बितेको २४ घन्टामा ६ सय ३० जनामा नयाँ टेष्ट भइसकेको छ भने ८ सयभन्दा बढी नमूना टेष्ट भइरहेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीका अनुसार केन्द्र र प्रदेश सरकार मातहतमा रहेका अस्पतालहरूमा आइसीयु र भेण्टिलेटर व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । उहाँका अनुसार कोरोना सङ्क्रमितका लागि देशभर ९ सय ४ ओटा आइसीयु शैया र ५ सय २ ओटा भेण्टिलेटर तयारी अवस्थामा छन् । काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न अस्पतालहरूमा २ सय ९८ ओटा आइसीयु शैया छन् । तीमध्ये २ सय ३३ ओटा कोरोना सङ्क्रमितको उपचारका लागि छुट्याइएका छन् । कोरोना सङ्क्रमितका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा २ सय ५७ ओटा भेण्टिलेटर तयार छन् । यस्तै, प्रदेशमा रहेका अस्पतालहरूमा ६ सय ७१ ओटा आइसीयु शैया र २ सय ४५ ओटा भेण्टिलेटर छन् ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण पर्न सक्ने असर तथा त्यस्ता सम्भावित सङ्कटबाट बचेर कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन अपनाउनु पर्ने उपायबारे स्थानीय तहसँग सुझाव माग्नुभएको छ ।
उहाँले कृषि उपज खरिदको व्यवस्था, जमिनको चक्लाबन्दी तथा बाँझो जमिनको उपयोग सम्बन्धमा सबै स्थानीय तहसित सुझाव माग्नुभएको हो । यसबारे स्थानीय तहले के-के गर्न सक्ने तथा प्रदेश र संघीय सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा समेत मन्त्री भुसालले सबै स्थानीय तहबाट सल्लाह-सुझाव लिइने आफ्नो अवधारणामा स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले ३१ हजार १ सय ८४ जनालाई राहत वितरण गरेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले अहिलेसम्म भएको राहत वितरण लगायतका विषयमा समिक्षा गर्न बैठक बसेर महानगरपालिका आगामी दिनमा कोरोना सङक्रमण फैलिन नदिन अझ प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढ्ने निर्णयभएको जानकारी दिनुभयो ।
देशभरका अदालत लकडाउन खुलाएको तीन दिनपछिमात्र खुल्ने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले चैत २८ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै लकडाउनको अवधि समाप्त भएको तीन दिनपछि मात्रै अदालत खोल्ने जनाएको हो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले वैशाख र जेठ महिनामा तय गरिएका परीक्षा स्थगित गरेको छ । त्रिविको केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समिति बैठकले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिमबाट बच्न स्नातक र स्नातकोत्तर तहका परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ ।
कीर्तिपुर नगरपालिकाले डेरामा बसिरहेका विद्यार्थीहरूलाई पनि राहत दिने भएको छ । चैत २८ गते नगरपालिकाले सूचना जारी गर्दै डेरामा बस्ने तथा खाद्यान्नको समस्या भएका विद्यार्थीहरूलाई राहतका लागि फारम भर्न आग्रह गरेको हो ।
कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सले ५१ लाख सहयोग गरेको छ ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा काठमाडौँले लकडाउनका अवधिमा काठमाडौँ उपत्यकामा ४२ हजारले लकडाउन उल्लङ्घन गरेको जनाएको छ । काठमाडौँमा मात्रै अहिलेसम्म ३७ हजारले लकडाउन उल्लङ्घन गरेको जनाएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा आफ्ना सांसदको १५ दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकम कट्टा गरी पठाउने भएको छ ।
कोभिड-१९ को जोखिम हुन नदिन लकडाउन जारी रहेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले तरकारीको विक्री वितरण गर्न विभिन्न ११ स्थान निर्धारण गरेको छ । बल्खु र कालीमाटी तरकारी बजारको भीडभाड हुन नदिन कामपाले कलङ्की, बाफल, स्वयम्भू, वनस्थली, गोङ्गबु, वसुन्धरा, गोपीकृष्ण हल, तीनकुने , लैनचौर, रत्नपार्क र कोटेश्वर चोकमा तय गरेको कामपा प्रशासन विभाग प्रमुख नमराज ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
इन्सेक नुवाकोट जिल्ला प्रतिनिधि नवदीप श्रेष्ठका अनुसार नुवाकोटमा होम क्वारेण्टाइनमा चैत २७ गतेसम्म २ सय ७९ जना रहेका छन् । स्थानीय तहको क्वारेण्टाइनमा १४ जना रहेका छन् । विदेशबाट आएको १५ दिन नाघेकाहरूलाई क्वारेण्टाइनमा बस्न नपर्ने भनिएको क्वारेण्टाइनमा बस्नेको सङ्ख्या घटेको छ ।
लकडाउनको अवधिमा खाद्य सामग्री र औषधिको अभाव हुन नदिन सदरमुकाम क्षेत्रका प्रमुख खाद्य पसल तथा औषधि पसलहरूको अनुगमन गरिएको छ । विदुर, बट्टार र त्रिशूली बजारका नौ ओटा खाद्य सामग्रीका पसल र तीन ओटा औषधि पसलको अनुगमन गरी मौज्दात खाद्यान्न तथा औषधिको अभिलेख राखेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख अविनारायण काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।
पञ्चकन्या गाउँपालिकाले लकडाउनको कारण समस्यामा परेका विपन्न तथा मजदुरहरूलाई खाद्यान्न राहत वितरण गरेको छ । ४ सय ७८ परिवारका १ हजार ५ सय ३४ जनालाई खाद्यान्न राहत प्रदान गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष तेजबहादुर तामाङले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्लाभर १ सय ९८ जनाको ज्वरो परीक्षण गरिएको । त्रिशूली जिल्ला अस्पतालमा मात्र ६० जनाको परीक्षण गरिएको प्रमुख डा. रेमकुमार राईले बताउनुभयो । परीक्षण गरिएका सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ ।
इन्सेक काभ्रे जिल्ला प्रतिनिधि हिरामान तामाङका अनुसार काभ्रे जिल्लाको अति विकट डाँडापारी क्षेत्रमा पर्ने महाभारत गाउँपालिकाले पसल खोल्ने समय निर्धारण गरेको छ । चैत २८ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले यस्तो निर्णय गाउँपालिकाका प्रवक्ता रविन मोक्तानले बताउनु भयो । कार्यपालिका बैठकले अत्यावश्क काम बाहेक एक वडाबाट अर्को वडामा जान नपाउने निर्णय समेत गरेको छ । पालिकाले यसअघि २० लाख रुपियाँको विपद् ब्यवस्थापन कोष स्थापना गरिसकेको छ ।
काभ्रेबाट बागमती प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद बसुन्धरा हुमागाईंले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र भित्र पर्ने स्थानीय तहलाई आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ । कोरोना भाइरससँग जुधिरहेका स्थानीय लाई सांसद हुमागार्इंले २५/२५ हजार रुपियाँका दरले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन थाल्नुभएको हो । सांसद हुमागाईंको निर्वाचन क्षेत्रमा पनौती, बनेपा, मण्डनदेउपुर नगरपालिका र बेथानचोक गाउँपालिका पर्छ । सांसद हुमागाईंले २०७६ चैत २८ गते मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको विपद् ब्यवस्थापन कोषमा २५ हजार रुपियाँ जम्मा गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले यसअघि प्रदेश स्तरमा गठन भएको मुख्य मन्त्री राहत कोषमा १ महिनामा आफूले पाउने सबै सेवा सुविधा बापतको रकम जिम्मा गर्नुभएको थियो ।
नमोबुद्ध नगरपालिकाका मेयर टिपी शर्मा तिमल्सिनाले विपद् व्यवस्थापन कोषमा आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ । मेयर तिमल्सिनाले आफ्नो व्यक्तिगत १ लाख ५ हजार ५ सय ५५ रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको हो । कोषमा नगरपालिकाको आफ्नै २० लाख रुपियाँ, प्रदेश सरकारको १२ लाख रुपियाँ रहेको छ ।
मेयर तिमल्सिनाका अनुसार नगरपालिकाले क्यान्सर रोगको बाहेक अन्य सबै प्रकारको रोगीले खाने औषधि घरमै पुर्‍याएको छ । सुगर, प्रेसरलगायत नियमित औषधि खाइरहेका बिरामीका लागि घरमै औषधि पुर्‍याएको मेयर तिमल्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।